Cristiano Ronaldo Oo Muuqaal Kusoo Afjaray Khilaafkii U Dhexeeyey Paulo Dybala - Gool24.Net
Cristiano Ronaldo Oo Muuqaal Kusoo Afjaray Khilaafkii U Dhexeeyey Paulo Dybala
Cristiano Ronaldo ayaa xalay dabbaal-deg uu sameeyey markii uu gool ka dhaliyey Sassoulo waxa uu ku soo afjaray khilaaf la wariyey inuu u dhexeeyo isaga iyo laacibka ay isku kooxda yihiin ee Paulo Dybala.
Ronaldo iyo Dybala ayaa la sheegay inuu u dhexeeyo khilaaf sababay in tababare Massimiliano Allegri uu kursiga kaydka dhigo xiddiga reer Argentine ee Dybala.
Khilaafka ayaa bannaanka usoo baxay ciyaartii Parma ay barbarraha 3-3 la galeen, markaas oo Dybala uu caddaan ah u muujiyey inuu ka cadhooday Ronaldo, hase yeeshee xilli dambe ayaa la sheegay inuu raalligelin ka bixiyey. Sidoo kale, tababare Allegri ayaa uu raalligelinta siiyey isagoo ka cadhooday beddel uu ku sameeyey.
SIDOO KALE AKHRISO: Goolhaye Adrian Oo Ka Warbixiyay Qaabkii Qariibka Ahaa Ee Dhaawucu Ku Soo Gaadhay Iyo Haddii Uu Liverool U Safan Karo Kulanka Southampton.
Sidaas oo ay tahay, haddana Allegri ayaa kaydka dhigay ciyaartii xalay, laakiin Ronaldo ayaa markii uu dhaliyey goolka waxa uu sameeyey dabbaal-deggii uu caanka ku ahaa Dybala.
Arrintan oo loo fasiray inay ahayd mid uu ku muujinayo inuu jecel yahay Dybala, sidoo kalena aanu jirin khilaaf u dhexeeya ayaa waxa ka hadlay tababare Allegri oo tibaaxay in labadiisa ciyaartoy ay ka dhaxayso wada-shaqayn iyo isfaham.
“Ronaldo iyo Dybala waxa hubaal ah inay wada ciyaari karayaan, ayna wada ciyaari doonaan, laakiin waxaanu u baahanahay in qof kasta uu si adag u shaqeeyo si kooxdu u dheellitirnaato.” Sidaas waxa yidhi tababare Allegri oo ku adkaysanayey go’aanka uu ku fadhiisiyey Dybala uu yahay mid uu ugu nisbaynayo shaqo xumo.
SIDOO KALE AKHRISO: Miyay Awooda Chelsea Is Bedeshay Kaddib Bixitaankii Eden Hazard & Imaatinka Tababare Lampard? Jurgen Klopp Ayaa Ka Jawaabay Kahor Kulanka Super Cup-ka.
Juventus ayaa kulanka soo socda ee Serie A waxay Sabtida la ciyaari doontaa kooxda yar ee Frosinone ka hor inta aanay Arbacada soo socota la ciyaarin Atletico Madrid.